Nanaiky ny fandroahana an-keriny ireo mpifindra monina Syriana ny fitsarana ambony ambony any Gresy
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nanaiky ny fandroahana an-keriny ireo mpifindra monina Syriana ny fitsarana ambony ambony any Gresy
Ny fitsarana tampony any Gresy tamin'ny zoma dia nanaiky ny famoahana an-keriny ny mpitsoa-ponenana Syriana roa, izay nanome ohatra ho an'ireo tranga an-jatony maro, hoy ny loharanom-baovao iray.
Mpanapaka Syriana 750 mahery no mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny filankevi-panjakana grika, hoy ny loharanom-baovao.
Ireo mpitsoa-ponenana, lehilahy roa 22 sy 29 taona, dia nametraka fanamby ara-dalàna taorian'ny nandavan'ny komity fialokalofana ny fiangavian'izy ireo tsy hiverina any Torkia, izay nidirany tao Gresy tamin'ny taon-dasa.
Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia afaka mifaninana amin'ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona.
Ny sesitany dia ampahany amin'ny fifanarahana iray misy eo amin'i Torkia sy ny UE izay natao hamehezana ny fivezivezin'ny mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina rehefa nahatratra antonony manan-tantara tamin'ny 2015.
Ny zavona zavamaniry lehibe indrindra eto an-tany dia nipetraka tao Dafeng any Jiangsu
'Tsy mety sy mety': Nesorin'i Londres ny fahazoan-dàlana hiasa Uber